‘Mandray anjara amin’ity ady ity koa izahay,’ hoy ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ ao Okraina · Global Voices teny Malagasy
‘Mandray anjara amin'ity ady ity koa izahay,’ hoy ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ ao Okraina
Mahazo fanekena ao amin'ny miaramila Okraniana ny miaramila LGBTQ+
Voadika ny 11 Jona 2022 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Português, Español, українська, русский, English
Ivan Gonzyk (Credit Ivan Gonzyk / Instagram). Nampiasaina nahazoana alalana.Ivan Gonzyk (Credit Ivan Gonzyk / Instagram). Used with permission.
Navoaka voalohany tao amin'ny Geneva Solutions ity lahatsoratry ny mpanao gazety Maryna Bakyeva ity. Navoaka eto indray ny dika nasiam-panitsiana ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty amin'ny Global Voices.
Zara raha aseho soritsoritra ireo solontenan'ny LGBTQ+ ao anatin'ny tafika Okrainiana. Tamin'ny taona 2018, nanapa-kevitra ny hanova izany i Viktor Pylypenko, tsy miafina amin'ny maha-pelaka menavazana azy tao amin'ny Donbas Volunteer Battalion, tamin'ny alalan'ny fananganana Miaramila LGBT, vondrona miaramila iray, menavazana sy mpilatsaka an-tsitrapo miady ho amin'ny fitovian-jo. Manadihady ny fomba nipoiran'ny heviny ity lahatsoratra ity, ahitana ny tantaran'ireo miaramila roa hafa avy amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ izay notohanan'ny sendikà (vondrona).
‘We were here’ (Teto izahay)
Okrainiana manodidina ny 330.000 no nandray anjara tamin'ny hetsika ara-miaramilan'ny governemanta Okraina hanoherana ireo mpitolona tarihin'i Rosia tany atsinanan'ny firenena nanomboka tamin'ny taona 2014, saingy tsy misy fampahafantarana ho an'ny daholobe momba ny isan'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ nandray anjara tamin'izany.
Izany no nanosika ny We Were Here, tetikasa fakàna sary teraka tao Kyiv, mampiseho ireo mpikambana ao amin'ny tafik'i Okraina ahitana ireo karazam-pironana ara-pananahana manokana samihafa. Anton Shebetko, Okrainiana mpanakanto sady mpaka sary monina any Amsterdam no naka ny sary.
“Ny tetikasa ‘We Were Here’ dia mikendry ny hampibaribary ireo olona etsy ankilany mahery fo amin'ny fiarahamonina Okrainiana amin'izao fotoana ary etsy andaniny, tsy noraharahian'ny ankamaroan'ny mpiray tanindrazana aminy,” hoy i Shebetko .
Nafenina ny tarehin'ny ankamaroan'ny olona ao amin'ny sary. Nivoaka nandritra ny fampirantiana ny iray tamin'ireo miaramila, Viktor Pylypenko, ka lasa lehilahy pelaka voalohany miharihary tao Okraina izay fantatra fa nandray anjara tamin'ny ady Rosiana-Okrainiana.
Nanamarika ny fiandohan'ny fananganana ny LGBT Military ihany koa izany fotoana izany, satria nanome aingam-panahy an'i Pylypenko mba hanangana fikambanana. Nizara tantara momba ny miaramila LGBTQ+ tao amin'ny pejiny Instagram ny sendikà mba hanairana ny sain'ny fiaraha-monina sy ny mombamomba ireo olona lesbiana, pelaka, tsy mifidy lahy na vavy, mpanova taovam-pananahana, intersex, queer ary ireo hafa ao anatin'ny tafika. Ireto no tantaran'olona roa nasongadina tao amin'ny pejy.
Maodelim-panoritana an-tsary ny fiainana lasa tompon'andraikitry ny fifandraisana
Miasa ao amin'ny tafi-piarovana ny faritany Kyiv i Illia Leontiev, 24 taona. Naniry ny hiditra tao amin’ny tafika izy talohan’ny ady. Tamin'ny 24 Febroary, nikasa ny hiasa amin'ny maha-maodely maneho fiainana an-tsary tao amin'ny anjerimanontolo i Leontiev mandra-panairan'ny kiririoka azy tamin'ny 4 maraina.
“Tsy nino aho fa tena nitranga izany,” hoy izy. Ny fanehoan-keviny voalohany dia ny nifandray tamin'ny fianakaviany ary nanamarina raha tsy maninona ry zareo. “Nameno kitapo aho avy eo ary nanomboka nieritreritra izay hataoko manaraka”, hoy izy nahatsiaro.
Niasa ho manamboninahitra mpampita hafatra ao amin'ny tafi-piarovana ny faritany ihany i Leontiev nony farany. Manamboatra tambajotra, manangana antenne (tandro-pifandraisana), ary manao fandaharana walkie-talkie no andraikiny.
“Tsy mitovy amin'ny tafika (noeritreretiko) sy ny zavatra nantenaiko ny tafi-piarovan'ny faritany. Nihevitra aho fa hahazo fiofanana ara-batana be dia be sy sakafo voalanjalanja nefa tsy tahaka izany. Tena nampatahotra tokoa izany rehefa nisy ny fanafihana daroka baomba sy balafomanga nilatsaka avy eny amin'ny 150 metatra, ”hoy i Leontiev.
Talohan'ny ady, nandeha matetika teny amin'ny toeram-pandihizana alina Kyrylivska Street tao Kyiv i Leontiev. Fantatra fa tena tia namana vondrom-piarahamonina LGBTQ+ ilay klioba ary iharan'ny fanafihan'ireo fikambanana farany havanana, izay matetika mahery setra sy misetrasetra.
Nilaza i Leontiev fa tsy tia fifandonana izy ary nifidy tsara izay mpiara-miresaka aminy sy ny lohahevitra resahana.
“Tsy mbola niatrika herisetra mihitsy aho: na teo amin'ny fiarovana ny faritany, na teo amin'ny fiainana andavanandro. Saingy fantatro fa tsy tia LGBTQ+ ny olona sasany ao amin'ny fiarovam-paritany, ”hoy izy.
Na dia eo aza ny zava-niainana ratsy natrehan'ny vondrom-piarahamonina misy azy, mino i Leontiev fa mihamandefitra kokoa i Okraina ary mihena ny fanavakavahana.
“Zava-dehibe ny manaiky fa mandray anjara amin'ny ady koa ny solontenan'ny LGBTQ +,” hoy izy. “Miaro ny fanjakanay mitovy amin'ny ataon'ny hafa izahay. Betsaka ny olona nanohana ahy, indrindra rehefa nivoaka aho. Noho izany, manana anjara toerana lehibe ny miaramila LGBTQ+. ”
Filoha lefitry ny sampana fitsaboana: ‘Tsy nanomboka nanaiky tanteraka ny tenako aho raha tsy taty aoriana’
Nilaza i Ivan Gonzyk, 26 taona, fa fotoana izao handraisan'ny Okrainiana fanapahan-kevitra hentitra amin'ny fanekena ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+.
“Efa manakaiky ho ekena ao amin’ny Vondrona Eoropeanina izahay. Tsy any Rosia izahay. Tsy firenena mpankahala pelaka izahay eto Okraina, ”hoy i Gonzyk. “Miara-mijoro amin'izao fotoan-tsarotra izao ny rehetra: tsy mijery raha pelaka na hafa izy ireo. Miara-mirotsaka an-tsitrapo izy ireo, miditra amin'ny tafika mitam-piadiana ao Okraina. Izany dia tokony hampiray antsika ary hampitsahatra ny tsy fifankahazoan-kevitra rehetra. “
Toy izany no niafarany niasa ho dokotera miaramila tao amin'ny faritry ny ATO — ilay faritra izay nanaovan'ny governemanta Okrainiana hetsika ara-miaramila tamin'ireo mpitolona tarihin'i Rosia — tao Bakhmut ao amin'ny faritr'i Donetsk.
Nanatevin-daharana ny hery fiarovana ny faritany ankehitriny i Gonzyk. “Ny andraikitro dia ny hitarika ireo miaramila any amin'ny hopitaly, hampianatra fanafody ara-paikady, hamatsy fanafody ho an'ny miaramila, ary handrindra ny asan'ny mpitsabo miaramila hafa,” hoy izy.
Tsy nanambara avy hatrany ny fironany ara-nofo i Gonzyk. “Tsy niresaka momba izany aho,” hoy izy. “Tsy nanomboka nanaiky tanteraka ny tenako aho raha tsy taty aoriana kely. Rehefa nanaiky tanteraka ny tenako aho dia azoko hoe ahoana izany mahazo aina izany ho ahy sy ny fomba hanehoako ny tenako amin'ny fiaraha-monina. Lasa tsara kokoa ny fiainako eto amin’ity tontolo ity.”
Miatrika olana ara-pitsarana maro ny mpivady mitovy taovam-pananahana any Okraina. Voarara tsy afaka manambady, manan-janaka sy manangan-jaza, mizara fananana, mahazo fitsidihan'ny mpitsabo, mandray anjara amin'ny fandevenana ny namany, ary tsy azo tononina amin'ny didim-pananan'ny sakaizany izy ireo.
Tsy tsara kokoa ny fiainan'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ ao Rosia. Misy ny lalàna “fampielezan-kevitry ny pelaka” manankery ao amin'ny firenena “izay mikendry ny hiaro ny ankizy amin'ny fampahalalam-baovao manohana ny fandavana ny soatoavina nentim-paharazana ara-pianakaviana” — manda amin'ny fomba mahomby ny zon'izy ireo hahazo vaovao momba ny fahasamihafan'ny lahy sy ny vavy — ary natao antsojay sy novonoina ny olona LGBTQ+ any Chechnya. Nilaza i Gonzyk fa tsy malahelo ny Rosiana izy.
“Taorian'ny zavatra nataon'izy ireo tamin'ny tanintsika ary na dia taorian'ny nahitako solontena LGBTQ+ tao amin'ny tafiny aza, dia tsy manana fangorahana ho azy ireo aho, na dia mifandraika amin'ny lalàny manohitra ny LGBTQ+ aza,” hoy izy.
“Nifidy ny governemantany izy ireo ary manohy mandihy araka ny feon'ny governemanta. Ny tena anjarantsika dia ny manala ireo fako ireo amin'ny faritanintsika Okrainiana ary manakana azy ireo tsy hamorona ny lalàny eto amin'ny tanintsika. Rehefa ao amin'ny taniny manokana izy ireo dia afaka manao izay tiany atao, ”hoy i Gonzyk nanampy.
Mbola anjorombala ao amin'ny fiarahamonina Okrainiana ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+
Na dia tsy voaràra aza ny fahasamihafan'ny ara-nofo (taovam-pananahana) ao Okraina (ara-dalàna hatramin'ny fahaleovantena tamin'ny taona 1991 izany), efa ela no niatrika fitsarana an-tendrony sy fanilikilihana ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+. Tao anatin'ny volana lasa fotsiny, nanatri-maso kabary fankahalana ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ avy amin'ny olo-malaza roa farafahakeliny ny Okrainiana.
Tany am-piandohan'ity volana ity, nilaza ilay Okraniana mpihira sady mpitsara ao amin'ny Eurovision Irina Fedishin fa maro ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ ao anatin'ireo mpandray anjara amin'ny Eurovision, ka sarotra ho azy ny nijery ilay fandaharana, niantso ny solontenan'ny LGBTQ+ ho “mpanota”.
Niseho vao haingana tamin'ny ben'ny tanànan'i Ivano-Frankivsk, tanàna Okrainiana ny tranga hafa iray. Raha niresaka tamin'ny Diabe ho an'ny Fiainana sy ny Soatoavin'ny Fianakaviana tamin'ny fiandohan'ny volana Mey, nilaza i Ruslan Martsinkiv fa “tsy afaka ny ho tia tanindrazana ny lehilahy pelaka, fa ny kristiana ihany no afaka ny ho tia tanindrazana.” Samy voatsikera ampahibemaso noho ny teniny ireo olo-malaza roa ireo.
Zi Fáamelu, mpitendry mozika mpanova fananahana izay voatery nafindra toerana avy any Okraina ho any Alemaina kosa nilaza tao amin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny Instagram fa, “na dia fantatra eran'izao tontolo izao aza ny tantarako, avy any Italia ka hatrany Japon, avy any Tiorkia ka hatrany Brezila, tsy te ho tsaroana ho niharan'ny heloka bevava fankahalana aho. Izaho no Zi Fáamelu, olombelona, ​​zanakavavy, mpanakanto, ary vonona amin'ny toko manaraka amin'ny fiainako. Mifidy ny fifaliana aho,” hoy izy tao amin'ny Instagram.
Azia Atsinanana 1 andro izay
Mongolia: fanentanana ilaina momba ny fandotoana mba hialàna amin'ny fahasimbàna lehibe kokoa
Ylli Morina: ilay 13 taona lalin-tsaina amin'ny matematika avy ao Skopje, mampianatra ireo mpianatry ny Anjerimanontolo
Eoropa Afovoany & Atsinanana 2 andro izay
Amerika Latina 5 andro izay